Afroz Shah – Ninkii Xeeb laga sabray dib ugu soo celiyay Rajada Nolosha | Radio Himilo
Home / Deegaan / Afroz Shah – Ninkii Xeeb laga sabray dib ugu soo celiyay Rajada Nolosha
Posted by: Mahad Mohamed July 7, 2020
Himilo – Kama jirin halkan dhaqanka xeebaha lagu yaqaan. Mana aheyn goob lagu kulmo. Waxaa intaas dheer, waxay dadka u aheyd musqul lagu saxaroodo, goob qashinka lagu qubo. In lagu aalamiiteeyana runtii way adkeyd. Dhammaan nuucyada qashinku waxay ahaayeen heegan.
Hadda waxaad arkaysaa boqollaal samafalayaal ah kuwaas oo jilbaha dhigtay si ay u gurbiyaan qashinka. Halkan waxay ku yimaadaan hal nin sababtiisa kaas oo halgan ugu jira inuu cirib-tiro dhibaatada muuqata ee degaanka ku socota – qashinka iyo bacaha.
Afro Shah waa qareen sharciga bartay kaas oo jecel inuu xeebaha ku tamashleeyo. Laba sanno kahor, markii uu daaqadda daqada uu degan yahay furtay, wuxuu arkay xeebta oo duleedkeedu qurux badan yahay. Balse afaafkeeda hore uu tuban yahay qashin iyo baco aan tira-koob laheyn.
“Waxaan is iri waa inaadan sidaas ku eegan xaaladdan oo aad wax ka qabataa,” ayuu yiri Shah.
Wax-ka-qabashadaasi waxay ka dhignaatay inuu laba mile ku dhawaad qashinka tuban gacmihiisa uga gurbiyo. Sannadkii 2015-ka, wuxuu bilaabay ol’ole loogu yeeray midkii ugu weynaa ee lagu nadiifiyo xeebaha. Dadaalkiisuna wuxuu dhiirri-geliyay in badan.
Shah wuxuu ugu danbeyn ku guuleystay inuu xeebta kusoo celiyo dabeecadeedii asalka aheyd. Waxaana sababtaas awgeed dib loo helay noolihii ku dhex damaashaadi jiray hareeraheeda.
Wuxuu helayaa farriimo bogaadin leh oo kaga imaanaya dadyow kala duwan oo caalamka ku nool kuwaas oo u sheegaya inuu dhiirri-gelin siiyay.
Isaga ahaan, wuxuu tani u arkaa waajibaad shaqsi ah oo arlada uu kula balamay inuu u qabto.
“Haddii ay dhacdo in dadka kale ay ka joogsadaan ficilkan, waxaan sameyn doonaa wax walba si aan kaligay u dhammeystiro.”
Previous: Real Madrid oo aan iibsan doonin cayaaryahanno illaa 2021
Next: Tammy Abraham oo heshiis cusub ka doonaya Chelsea